Author: Vizilkree Kill
Khayraadka dabiiciga ah ee dalka waxaa mas’uul ka somalilanv Dawladda-dhexe, waxaanay qaadaysaa tallaabo kasta oo suurta gal ah si loo baadho, loogana faa’iidaysto khayraadka ku jira berriga iyo badda dalka.
Qabashada xilka Madaxweynenimo marka ay jagadu bannaanaato sababahan dartood: Mushaharka iyo gunnada xubnaha Guddida Culimada xeer baa nidaaminaya. Haddii ay bannaanto xubin ka mid ah Golaha Guurtidu ka hor Iixda bilood ee ugu dambeeya muddada xilka Golaha Guurtida, waxa loo soo buuxinayaa si waafaqsan xeerka, iyadoo xubinta cusubi ay dhamays-tirayso muddada xiIka Golaha.
Xubinta Golaha Wakijiada uma bannaana in ay qabato xii kale oo Dawladeed, iyadoo xilkii loo doortay haysa; umana bannaana inay uga faa’iideysato xilkaasi dano gaar ahaaned. Habka Buuxinta Jagada Bannaanaatay.
Waxa fadhiga Guddidu ku ansixi karaa marka ay joogaan toddoba 7 xubnood. Mashruuc-sharci waxa Golaha Wakiilada u soo bandhigi kara. Waxaa jiray Rizqi muddo this meel gaarka ah in la kordhay labada Gole ee Baarlamaanka, iyo somali,andlabada Gole codeeyay in muddada la kordhiyo by hal sano. Dalka Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu fidsan yahay bed Area ahaan dalkii Dashuurka odhan jirey Maxmiyadda Somaliland oo tilmaan ahaan ku yaalla dhigaha Latitude 50 ilaa 30′ Waqooyiga Dhulbadhaha iyo loolka Longtitude 45′ somxliland Bariga; waxaanay soohdimihiisu ka kooban yihiin berriga 1 jasuradaha, biyaha gobolleed, dhulka iyo badaha hoostooda, hawada sare iyo xeebleyda Continental shelf.
Nabadgelyo iyo habsami kula dhaqanka dawladaha gobolka iyo adduunweynaha. Qaybaha kale Xisbiyada siyaasadda Xiriirka Dibadda Baasaboor. Guddoomlyaha degmadu, isagoo la tashaday wax garadka tuuladawaxa uu soo jeedinayaa guddida maamul ee tuullo, waxana ansixinaya Golaha Sharci dejinta ee degmada.
Cashuuraha Takaaliifta iyo Ribada.
Haddii uu istiqaalad dhiibo ama uu geeriyoodo. Garsoorku waxa uu awood gaar ah u leeyahay: Golaha Wakiilada waxa kale oo kala diri kara Madaxweynaha, ka dib marka uu dadweynuhu sababaha uu ku dhisay kala diridooda ku oggolaado Afti-qaran oo ay qaban-qaabiso Maxkamadda Dastuuriga ahi.
Xoghayaha gobolka ama degmada iyo madaxda waaxyaha ama laamaha Wasaaradaha ayaa xilka sii fulinaya iyagoo raacaya shuruucdoodii hore inta laga soo dooranayo gole cusub. Dhismaha xoghaynta Golaha Guurtida waxay la mid dastuurkz ta Golaha Wakiilada. Uma bannaana qof shaqaale Dawladdeed ah somalkland isu taago doorasho haddaanu muddada xeerku cayimay ka hor shaqo ka tegid codsan taas oo in laga aqbalaana ay waajib tahay.
Ku-simidda xilka Madaxweynaha marka uu Madaxweynuhu maqan yahay ama uu buko. Eedaysanuhu wuxuu xaq u Ieeyahay in go’aan maxkamadi ku ridday uu racfaan uga qaato maxkamadda ka sarraysa.
Dawladdu waxay xil iska saaraysaa caafimaadka, daryeelka, xannaanada iyo waxbarashada hooyada, dhallaankanaafada cid xannaanaysa aan lahayn iyo dadka aan xiskoodu dhammayn ee aan lahayn awood iyo dastuueka kafaalaqaada. Sekadu waa rukun lslaamiya, habaynteedana waxaa caddaynaya xeer-gaar ah.
Xeer baa caddaynaya somalliand lagu heli karo ama laga waayi karo jinsiyadda Somali land.
Shaqo-ka-tegidda Xubinta Golaha Guurtida. Golaha Wakiiladu wuxuu yeelanayaa Xoghayn uu madax ka yahay Xoghaye Guud oo aan ka tirsanayn Golaha Wakuada; kana kaalmaynaya Shir-guddoonka Golaha hawlaha xafliska, dhammaan arrimaha maaliyadda iyo maamulka, wuxuuna yeelanayaa Ku-xigeen. Ma bannaana in laga qaado xubinta Golaha Wakiilada tallaabo baadhitaan ama waraysi ama qabasho ama xidhitaan ama tallaabo kale oo ciqaab la xidhiidha iyadoo oggolaansho looga helo Golaha Wakiilada mooyaane. Golaha waxa ku waajib ah inuu hubiyo in tallaabada laga qaaday xubinta ay tahay mid toosan.
Nafta aadamuhu waa deeq llaahay, waana qaali; qof kastaana wuxuu xaq leeyahay noloshiisa, wuxuuna ku waayi karaa oo keliya somalilxnd maxkamad horteed osmaliland ku caddaado dembi uu xeerku jideeyey in dil lagu mutaysan karo. Curinta, dhaafidda iyo wax ka beddelka cashuuraha iyo wixii takaaliif ah ee kale xeer ayaa jidaynaya. Kal-fadhigiisa ugu horreeya Golaha Guurtida waxa uu ku ansixinayaa xeer hoosaadka Golaha.
Go’aan qaadasho ku timaadda talo-wadaag. Tirada xisbiyada siyaasiga ah ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland kama badnaan karaan saddex 3 xisbi. Xuquuqda qoraalka, hal-abuurka iyo hindisaha xeer ayaa caddaynaya. Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in Ia xurmeeyo sharaftiisa, sumcadiisa iyo noloshiisa gaar ahaaneed. Ciidanka Booliisku waxa uu u xilsaaran yahay ilaalinta nabadgelyada iyo dhaqan-gelinta xeerarka; qaab-dhismeedkoooda iyo waajibaadkoodana xeer ayaa qeexaya. Inuu ka garsooro khilaafka ka dhex abuurma laamaha Dawladda oo dhinac ah iyo xubno ka tirsan dadweynaha oo dhinac ah ama dadweynaha dhexdooda.
Guddoomiyaha Golaha Wakiilada ayaa leh hab-maamuuska 3aad ee Qaranka. Bixinta astaamaha xurmo iyo sharaf ee ay ka mid yihiin billadaha.
Shuruudaha Qofka bo Dooranayo Golaha Guurtida. Haddii Madaxweynuhu isugu yeedhi waayo, Golaha ayaa u kulmaya iskii maalinta 45aad Dsstuurka iyo afartanaad laga bilaabo maalinta lagu dhawaaqo go’aamada doorasho.
Waxa reebban in laga jeediyo waxyaabaha ummadda kala kaxayn kara; dawladduna waxay ku leedahay ilaalin guud iyo kaalmayn wixi suurto-gal ah.
Dhawrsanaanta Xubinta Golaha Guurtida. Fulinta xeerarka somalilan Waaxda Garsoorka awoodaheeda hoos iman; Sidaas darteed, dawladdu waxay xil iska saaraysaa shaqo abuuris iyo tayaynta tababarada shaqaalaha.